कोरोनाको महामारीमै चलचित्र छायांकन : RajdhaniDaily.com
Home Not-to-be-missed कोरोनाको महामारीमै चलचित्र छायांकन
काठमाडौं । चलचित्र प्रदर्शनका लागि सिनेमा हल कहिलेबाट खुल्ने भन्ने टुंगो छैन । महामारीको रूप लिँदै गरेको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) बाट अहिले नेपाली चलचित्र उद्योग पूर्ण प्रभावित छ । तर, गत साताबाट लकडाउन खुकुलो भएसँगै चलचित्रकर्मीहरू यतिबेला चलचित्रको निर्माण तयारीमा जुट्न थालेका छन् । केही चलचित्रले मुहूर्तसँगै छायांकनसमेत सुरु गरिसकेका छन् भने केही चलचित्रको दसैंपछिबाट छायांकनको तयारी हुँदै छ ।
केही चलचित्र भने यतिबेलै छायांकनमा उत्रिएका छन् । यसै क्रममा गत महिनाबाटै निर्देशक शोभित बस्नेतले आफ्नो नयाँ चलचित्र लक्ष्मीपूजाको छायांकन सुरु गरेका छन् । थानकोटस्थित आफ्नो स्टुडियोमा केही प्रतिशत र बाँकी छायांकन काठमाडौंकै विभिन्न स्थानमा गरिरहेको निर्देशक शोभित बस्नेतले बताएका छन् । यसपटक दसैंबाटै सिनेमा हल खुल्ने सम्भावना भएकाले सोही मितिमा रिलिज गर्ने लक्ष्यसहित चलचित्र लक्ष्मीपूजाको छायांकन गरिरहेको शोभितको कथन छ । सामाजिक दूरी कायमसहित भइरहेको छायांकन अहिले अन्तिम अवस्थामा पुगेको पनि उनले बताए । जसमा सलोन बस्नेत, रियासा दाहाल, जयकिसन बस्नेतसहितको मुख्य भूमिका रहेको छ ।
यसैबीच अर्को चलचित्र गोबर गणेशको पनि अहिले काठमाडौंमा छायांकन भइरहेको छ । जयकिसन बस्नेतकै मुख्य भूमिका रहेको यो चलचित्रको पनि छायांकन अन्तिम तयारीमा पुगेको छ । आफूहरूले यो चलचित्र पनि सामाजिक दूरी कायम गर्दै छायांकन गरेको निर्माण पक्षको कथन छ ।
यता निर्देशक मिलन आले मगरले कोरोना संक्रमणलाई समेत चुनौती दिँदै यसै साता काठमाडौंमा चलचित्र हिँड्दा हिँड्दैको शुभ साइत सम्पन्न गरे । यो चलचित्रको यसै साताबाट काठमाडौंदेखि नै छायांकन सुरु हुने भएको छ । आफूहरू कोरोना संक्रमण हुनबाट सावधानी अपनाउँदै चलचित्रको छायांकनमा उत्रन लगेको निर्देशक मिलनले बताएका छन् । यो चलचित्रमा अभिनेता आकाश श्रेष्ठ, सलोन बस्नेत, नवोदिन अभिनेत्री रेखा शाहलगायतका विभिन्न कलाकार रहेका छन् ।
चलचित्रको आधाजसो छायांकन काठमाडौंमा सकेपछि निर्माण टिम तराईतर्फ लाग्नेछ । तराईमा छायांकन स्थल पक्का भएपछि आफूहरू चलचित्रको बाँकी छायांकनका लागि तराई जाने निर्देशक मिलनले जानकारी गराएका छन् । उनकोे अनुसार यो चलचित्र सामाजिक प्रेमकथामा निर्माण हुँदै छ ।
निर्देशक आकाश अधिकारीले पनि अब आफ्नो नयाँ चलचित्रको छायांकन दसैंपछिबाट सुरु गर्ने भएका छन् । नयाँ चलचित्रमा उनले कलाकारलाई अनुबन्धित गरेर अभिनय कार्यशाला पनि सुरु गर्न लागेका छन् । यसै साता आफ्नो चलचित्रको नाम चलचित्र विकास बोर्डमा दर्ता गरेर निर्माण घोषणा गर्ने बताएका छन् ।
एक्सन थ्रिलर कथामा निर्माण हुने यो चलचित्रको नायिकाको चयन अब केही दिनमै हुने पनि अधिकारीको कथन छ, ‘कोरोना संक्रमण काठमाडौंमा व्यापक रूपमा बढिरहे पनि कोरोनाबाट जोगिएर छायांकनमा उत्रनुपर्ने बेला आएको छ । हामीले काम सुरु ग¥यौं भने चलचित्र उद्योग बिस्तारै चलायनमान हुनेछ र अरूलाई पनि काम गर्ने हौसला मिल्नेछ । अहिले अरू पनि केही चलचित्र दसैंपछि छायांकनमा उत्रने तयरी गरिहेका छन् । केही चलचित्र भने तिहारबाट मैदानमा उत्रने भएका छन् ।
काठमाडौं । सरकारले पूर्व–पश्चिम रेलमार्गको काँकडभिट्टा–इनरुवा खण्ड निर्माणको ठेक्का चौतर्फी विरोध भएपछि रद्द गरेको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गतको रेल विभागले १८...
Exclusive Rajdhani Online - February 12, 2020 0
भक्तपुर । जिल्लाको खरिपाटीस्थित नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको तालीम केन्द्रको मुख्य गेटमै ठूलो कालो ब्यानर टाँगिएको छ । ब्यानरमा पाँच नारा लेखिएका छन् । गेटको...
Breaking News Kumar Raut - August 19, 2020 0
भर्खरै Kumar Raut - September 7, 2020 0
Breaking News Sushila Bishwokarma - February 29, 2020 0
चौतारा । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले कार्यदलको सुझावअनुसार परिमार्जन गरेर मात्र अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसिसी) पारित हुने बताएका...
प्रदेश Sushila Bishwokarma - February 20, 2020 0
बझाङ । बझाङ जिल्लाको खप्तडछान्ना गाउँपालिकाको लामाखेतमा जीप दुर्घटना हुँदा गाँउपालिकाकी उपाध्यक्ष पाउसरा थापा सहित ९ जना घाईते भएका छन् । बिहान ११ बजे...
काठमाडौं । प्रधानमन्त्रीले गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तारलाई रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमाथिको सुनुवाइ हेर्न नभ्याउने सूचीमा राख्दै अर्को पेसी १६ पुसका लागि तोकिएको...